Tag: ballaca vimeo
Customize WordPress Jetpack Ballaaran Shortcode
Khamiis, Agoosto 29, 2013 Sabtida, Oktoobar 24, 2015 Douglas Karr
Markii WordPress ay sii daayeen qalabka 'Jetpack', waxay fureen celceliska rakibidda WordPress illaa qaar ka mid ah astaamaha waaweyn ee ay ku darayaan xalkooda martigelinta. Markaad awood u yeelatid qalabka, waxaad awood u siineysaa tan astaamo ah, oo ay ku jiraan gaaban. Marka la eego, WordPress uma ogolaato qoraagaaga celceliska inuu ku daro qoraalka warbaahinta dhexdeeda waxa ku jira qoraal ama bog. Kani waa astaan ​​amni oo loola jeedo in la yareeyo fursadaha khashinka bartaada. Si kastaba ha noqotee, iyadoo